ဆီးချိုရောဂါနှင့် ခြေထောက် – Healthy Life Journal
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—
Q. ဆီးချိုသမားတွေမှာ ခြေထောက်အနာဖြစ်တာ၊ ခြေထောက်ဖြတ်ရတာတို့ကို မကြာခဏ ကြားသိနေရပါတယ်။ အဲဒါလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိချင်ပါတယ် ဆရာ။
A. ဆီးချိုသမားတွေရဲ့  နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တတ်တဲ့ ဝေဒနာတွေထဲမှာ သွေးကြောအသေးလေးတွေကို ထိတယ်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ နံပါတ်တစ်က မျက်လုံးပါ။ ဆီးချိုသမားတွေက မျက်လုံးကိုစစ်တယ်၊ ကျောက်ကပ်ကိုစစ်တယ်၊ နှလုံးကိုစစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆီးချိုသမားတွေ မေ့နေတဲ့အရာက ခြေထောက်ပဲ။ ဘယ်တော့မှ ခြေထောက်ကို မကြည့်ဘူး၊ မစစ်ဘူး။ ဆရာဝန်တွေကလည်း ခြေထောက်ကိုကြည့်တဲ့ စစ်ဆေးမှုဆိုတာ အရင်တုန်းက သိပ်မရှိခဲ့ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်ကမှ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြောက်ဥက္ကလာဆေးရုံကြီးနဲ့ မန္တလေးပြည့်သူ့ဆေးရုံကြီးတွေမှာ စပြီး ဆီးချိုရောဂါနဲ့ ခြေထောက်ရောဂါ သီးသန့်စစ်ဆေးတဲ့ ဌာနတွေ ဖွင့်လိုက်တာပါ။
Q. ဆီးချိုသမားတွေ ခြေထောက်ထိတဲ့အခါ ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေ ပြတတ်ပါသလဲ ဆရာ။
A. ဆီးချိုသမားတွေက ရောဂါထိန်းချုပ်မှုမကောင်းရင် အာရုံကြောတွေထိတယ်။ အာရုံကြောတွေထိတော့ ထုံတာ၊ ကျဉ်တာတွေဖြစ်တယ်။ ပထမအဆင့်က ကျဉ်တယ်၊ ကိုက်တယ်၊ ပုရွက်ဆိတ်ကိုက်သလို၊ အပ်နဲ့ထိုးသလို ခံစားရတယ်။ ဆီးချိုက သိပ်တက်ပြီး အာရုံကြောတွေကို သွားဆွတဲ့အတွက် နာတယ်။ ဒါက ပထမအဆင့်ပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်နဲ့ ပြရပါမယ်။ အာရုံကြော စထိနေပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဆီးချိုကိုနိုင်အောင်ထိန်း၊ လိုအပ်တဲ့ ဆေးကိုသောက် . . ဒီနည်းနဲ့ ထိန်းလို့ရပါတယ်။
“ အခုနောက်ပိုင်း ဆီးချိုသမားတွေ လက်သည်းညှပ်ရင်တောင် ၀ိုက်မညှပ်ခိုင်းပါဘူး။ ၀ိုက်ညှပ်တော့ ထောင့်ကအသားတွေ ပါသွားတဲ့အခါ အဲဒီနေရာကနေ ပြည်ဝင်ပြီး အနာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုနောက်ပိုင်း လက်သည်းညှပ်ရင် တည့်တည့်ပဲ ညှပ်ခိုင်းပါတယ်။”
အဲဒီအဆင့်ကျော်သွားရင် အာရုံကြောက ပျက်သွားရော။ ပျက်သွားရင် ထုံသွားတယ်။ အဲဒီအခါ မသိတော့ဘူး။ တစ်ခါတလေမှာ ဆိုပါတော့။ ဆီးချိုသမားက ခြံထဲကို ဖိနပ်မပါဘဲ ဆင်းသွားတယ်။ ခြေထောက်မှာ ဆူးစူးတယ်။ ဆူးစူးတော့ ခြေထောက်ထဲ ဆူးဝင်ပေမယ့် မသိလိုက်ဘူး။ ခြေထောက်က ထုံနေတယ်။ သုံးရက်လောက်ကြာတော့ အနာကပုပ်သွားတယ်။ ပုပ်တော့လည်း ဆေးမြီးတိုနဲ့ လုပ်ရော။ မလိုလားအပ်ဘဲနဲ့ အနာက ခြေထောက်အပေါ်ဘက်အထိပြန့်ပြီး ခြေထောက်ဖြတ်လိုက်ရပါတယ်။ ဘာမှမဆိုင်ဘဲ ဖိနပ်လေး မစီးမိတာတစ်ခုတည်းနဲ့၊ ဆူးလေးတစ်ချောင်း စူးမိတာနဲ့ ခြေထောက်ဖြတ်လိုက်ရတဲ့ ဘ၀၊ တစ်သက်လုံး ဒုက္ခိတဖြစ်သွားတဲ့ ဘ၀တွေ အများကြီး ဆရာတို့ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆီးချိုသမားတွေက အာရုံကြောထိရင် ထုံတယ်။ ဆီးချိုသမားတိုင်းက သွေးကြောကျဉ်းတယ်၊ သွေးကြောကျဉ်းတာရယ်၊ ထုံတာရယ်ပေါင်းလိုက်ရင် အနာဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းက အလွန်များပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ခဲစူးမိတာဖြစ်ဖြစ်၊ အသားမာတက်တာဖြစ်ဖြစ် ဒါမျိုးဖြစ်သွားရင် အနာဖြစ်သွားပြီ။ ဒါကို သတိထားဖို့ လိုပါတယ်။ သတိမထားမိဘဲ ဒီအတိုင်းထားလိုက်ရင် ပိုးဝင်ပြန့်နှံ့သွားတဲ့အခါ ခြေထောက်ဖြတ်လိုက်ရတာ တွေရှိပါတယ်။
Q. ဆီးချိုသမားတွေမှာ ဘယ်လိုလူတွေက ခြေထောက်ပြဿနာ ပိုအဖြစ်များပါသလဲ ဆရာ။
A. ဆီးချိုသမား ဆေးလိပ်သောက်ရင် ပိုဆိုးပါတယ်။ ခြေထောက်သွေးကြောတွေ အကုန်ပုပ်ကုန်ပါတယ်။ ခြေထောက်ဖြတ်ရသူတွေ အများကြီးပဲ။ ဒူးအထက်ကဖြတ်ရတယ်၊ ဒူးအောက်ကဖြတ်ရတယ်။ အဲဒီလို အများကြီးဖြတ်ရတော့ တကယ့်ဒုက္ခိတလို ဖြစ်သွားတယ်။
Q. ဆီးချိုသမားတွေ ခြေထောက်ဖြတ်ရတဲ့အထိ မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလိုက်နာသင့်ပါသလဲ ဆရာ။
A. ဆီးချိုသမားတွေကို အဓိကမှာချင်တာက ကိုယ့်ခြေထောက်ကို ကိုယ့်မျက်နှာလို သဘောထားပြီး မျက်နှာကို နေ့တိုင်း မှန်ကြည့်သလိုမျိုး ကြည့်ပေးပါ။ ကိုယ့်မကြည့်နိုင်ရင် သူများကြည့်ခိုင်းပါ။ မကြည့်ခိုင်းချင်ရင် ကိုယ့်ခြေထောက်ကို မှန်လေးထောင်ကြည့်ပါ။ ဘာတွေကို ဦးစားပေးကြည့်ရမလဲဆိုတော့-
(၂) အသားမာတွေ တက်နေသလား၊
(၃) ခြေထောက်အနေအထားမှန်ရဲ့ လား ဆိုတာတွေကို အမြဲကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ တွေ့ရင်လည်း သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကို အမြန်ပြဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဆီးချိုသမား ခြေထောက်မှာ အနာဖြစ်ရင် သေချာကြည့်ရပါတယ်။ အနာက အပေါ်အထိ ပြန့်နှံ့သွားမှာလား။ တချို့ ကျတော့ မဖြတ်လို့မရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်သွားပြီ။ အဲဒီအခြေအနေမှာဆိုရင် ခြေချောင်းထိပ်လေးကို ဖြတ်ရတယ်၊ ခြေချောင်းထိပ်လေးကို ဖြတ်လိုက်ရင် အပေါ်ကို မတက်တော့ဘူး။ မဖြတ်ဘဲထားရင် ဒူးအောက်ကနေ စဖြတ်ရတတ်တယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာဆိုရင် လူနာနဲ့ တိုင်ပင်ရပါတယ်။ လူနာတွေကိုလည်း လိုအပ်ရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ကုသဖို့လိုပါတယ်။
Q. ဆီးချိုလူနာတွေကို အဓိကမှာချင်တာရှိရင် ပြောပြပေးပါ ဆရာ။
A. ဆီးချိုလူနာတွေ လာပြတဲ့အခါ အာရုံကြောတွေ စမ်းတယ်၊ သွေးကြောတွေ ပွင့်၊ မပွင့် စမ်းတယ်။ လက်နဲ့စမ်းကြည့်တယ်၊ မရရင် အမျှင်လေးတွေနဲ့ ထပ်စမ်းတယ်၊ မရရင် စက်နဲ့စမ်းတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ ခြေထောက်ဖြတ်ရတာကို ကာကွယ်ဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
အခုနောက်ပိုင်း ဆီးချိုသမားတွေ လက်သည်းညှပ်ရင်တောင် ၀ိုက်မညှပ်ခိုင်းပါဘူး။ ၀ိုက်ညှပ်တော့ ထောင့်ကအသားတွေ ပါသွားတဲ့အခါ အဲဒီနေရာကနေ ပြည်ဝင်ပြီး အနာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုနောက်ပိုင်း လက်သည်းညှပ်ရင် တည့်တည့်ပဲ ညှပ်ခိုင်းပါတယ်။
ခြေကြားထဲကိုလည်း ကြက်သီးနွေးထရုံလောက်ပဲ နွေးတဲ့ရေနဲ့ ဆေးခိုင်းပါတယ်။ ဆေးပြီးရင် သေချာခြောက်အောင် သုတ်ပေးရပါမယ်။
ဆီးချိုသမားတချို့က အေးလို့ဆိုပြီး ဆောင်းတွင်းဘက်တွေမှာ ရေနွေးအိတ်တွေကပ်ပြီး အိပ်ကြတယ်၊ အဲဒီအခါ ဆီးချိုသမားတွေက ပူလို့ပူမှန်း မသိကြဘူး။ အဲဒီမှာ အရည်ကြည်ဖုတွေထပြီး အနာတွေဖြစ်တာ အများကြီးရှိတယ်။
ဆီးချိုနဲ့ ခြေထောက်က ဆက်စပ်မှုအများကြီး ရှိပါတယ်။ ထုံတာ၊ ကျဉ်တာ၊ ကိုက်တာ၊ နာတာရှိရင် သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ပြပါ။ သူတို့ကနေ အာရုံကြောတွေ၊ သွေးကြောတွေကို စစ်ပါလိမ့်မယ်။ လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို ကုသပေးပါလိမ့်မယ်။ ဆီးချိုနဲ့ ခြေထောက်က တော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့အထဲမှာ ပါတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒါလေးကို မမေ့မလျော့ဘဲ လိုက်နာကြဖို့ တိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါတယ်။